1 - 10 ka 10646 Uluhlu
Ipapashwe ngu Mubasir Junaid
First Floor3 Bedrooms With Attach WashroomsDrawingPowder RoomTV LoungeKitchenStoreTerraceseparate entranceNear To Mosque and School and commercialCar Parking Space Available For 1 CarsMore details please call me.
Upper portion3 Bedrooms With Attach WashroomsDrawing RoomDining RoomKitchenTV LoungeStorePowder RoomCar PorchIdeal Location Easy accessExcellent View Solid Construction For More Information You May ContactNear To Mosque and School and commercialCar Parking Space Available For 1 CarsMore details plea...
IPakistan, ngokusemthethweni iRiphabliki yamaSilamsi ePakistan, lilizwe elikuMazantsi eAsia. Ililizwe lesine ngobuninzi belizwe elinabemi abangaphezu kwe-212,2 yezigidi. Lelona lizwe likhulu ngobubanzi obungama-33, lithatha i-881,913 yeekhilomitha (340,509 zeekhilomitha). IPakistan ine-1,046 yeekhilomitha (i-650 yeekhilomitha) ngaselunxwemeni kuLwandle lwaseArabia kunye neGulf of Oman esemazantsi kwaye umda yiIndiya ukuya ngasempuma, Afghanistan ukuya entshona, Iran kumazantsi mpuma, kunye China kumazantsi mpuma. Yahlulwe ngokuthe ngcembe eTajikistan yi-Wakhan Corridor yase-Afghanistan emantla ntshona, kwaye yabelana ngomda waselwandle no-Oman. Umda ngoku owenza iPakistan yayiyindawo yeenkcubeko ezahlukeneyo zasendulo kwaye udibene nembali yendawo ebanzi yamaIndiya. Imbali yakudala ibandakanya indawo ye-Neolithic yaseMehrgarh kunye ne-Bronze Age Indus Valley Impucuko, kwaye kamva yaba likhaya lilawulwa ngabantu beenkolelo ezahlukeneyo kunye neenkcubeko, kubandakanya amaHindu, ama-Indo-Greeks, amaSilamsi, amaTurco-Mongols, ama-Afghans kunye namaSikh. Indawo ilawulwa ziikumkani ezininzi kunye neeDynasties, kubandakanya uBukhosi bama-Achaemenid basePersi, uAlexander III waseMacedon, uBukhosi baseSeleucid, uBukhosi base-Indiya iMaurya, uBukhosi baseKushan, uBukhosi baseGupta, iArabhu Umayyad Caliphate, iGhurid Sultanate, iGhaznavids Ubukhosi, i-Delhi Sultanate, uBukhosi baseMongol, uBukhosi baseMagagh, uSur empire, uBukhosi base-Afghanistan, uBukhosi beSikh (ngokuyinxalenye) kwaye, kutshanje, iBritish India Empire.Pakistan yafumana inkululeko ngo-1947 njengelizwe lamaSilamsi amaIndiya Ukulandela intshukumo yePakistan, eyayifuna indawo kwiingingqi zama-Muslim e-Bhritane India ngokwesahlulelo. Ililizwe elihluka ngokwaselulwimini nangokolwimi oluhlukileyo, ngesimo esijongene neJografi kunye nezilwanyana zasendle. Ekuqaleni i-Pakistan, i-Pakistan yamkela umgaqo-siseko ngo-1956, yaba yiriphabliki yamaSilamsi. Imfazwe yamakhaya yobuhlanga kunye nokungenelela komkhosi wamaIndiya ngo-1971 kwabangela ukukhululeka kwe-Mpuma yePakistan njengelizwe elitsha laseBangladeshi. Ngo-1973, iPakistan yamkela umgaqo-siseko omtsha owacacisa ukuba yonke imithetho kufuneka ihambelane nolwaphulo-mthetho lobuSilamsi njengoko lubekiwe kwiQuran naseSunnah. Ngo-2008, iPakistan yatshintshela kulawulo lwabemi. Ngo-2010, iPakistan yamkela inkqubo yepalamente yonyulo lwamaxesha athile. Amandla aphakathi, iPakistan inomkhosi wesithandathu okomhlaba oxhobileyo kwihlabathi kwaye ikwangamandla enyukliya nakwilizwe elichaziweyo njengezixhobo zenyukliya. Ibalwa phakathi koqoqosho oluhlumayo nolukhokelayo kwezoqoqosho lwehlabathi, kwaye ixhaswa yenye yezona ndawo ziphambili nezikhula ngokukhawuleza ezikumgangatho ophakathi. Imbali yezopolitiko yasePakistan ukususela kwinkululeko ibonakaliswe ngamaxesha olawulo lomkhosi, ukungazinzi kwezopolitiko kunye neengxabano kunye ne-India. Ilizwe eli liyaqhubeka nokujongana neengxaki, kubandakanya nokugcwala, intlupheko, ukungafundi kunye norhwaphilizo. IPakistan ililungu le-UN, umbutho wokubambisana wase-Shanghai, i-OIC, i-Commonwealth of Nations, i-SAARC, umanyano lomkhosi wezobuzwe wamaSilamsi, kwaye ungoyena mntu ungoyisiyi-NATO.